လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် Ecommerce Websiteလိုအပ်လား? : A Creative Digital Agency - Digital Dots
လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် Ecommerce Website လား?
လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် Ecommerce Website မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ Online ကနေဖြစ်လို့ အချိန်မရွေး ရောင်းနိုင်ပြီး အလွယ်တကူယုံကြည်မှုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။Customer များအနေနဲ့လည်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး လွယ်ကူစွာငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်။Digital Channel တွေမှာလည်း Brand တည်ဆောက်ရလွယ်ကူစေပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ Offline Store ကိုလည်း Promote လုပ်ရလွယ်ကူစေတာကြောင့် ရောင်းအားတက်လာစေပါတယ်။ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို Customers များအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့အပြင် Conversation Rate နဲ့ Customer များရဲ့ နှစ်သက်မှုတွေအလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့အတွက် Ecommerce Website တွေကို လုပ်ငန်းသေးသည်ဖြစ်စေ ကြီးသည်ဖြစ်စေ လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။
Facebook Stores VS Ecommerce website
Ecommerce websites တွေနဲ့ Facebook stores တွေ ဘာကွာခြားသွားလဲဆိုရင်တော့ Facebook ကတော့ သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း တင်းကျပ်လှတဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ပစ္စည်းတင်တာတွေကအစ Approve ယူရတဲ့အထိ တင်းကျပ်ထားပါတယ်။Ecommerce Website တွေကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် Product တွေကို စိတ်ကြိုက် တင်ရောင်းလို့ရတဲ့အပြင် Facebook store တွေနဲ့မတူပဲ customer တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ designs တေွ theme တွေကို ဖန်တီးထည့်သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် data ပိုင်းမှာလည်း ဘယ်သူတွေ ဘယ်ကနေ ဒီ Shop ကိုနှိပ်သွားတာလဲ ဘယ်ပစ္စည်းက လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးလည်းဆိုတာကို အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်တာကြောင့်Promote လုပ်တဲ့အချိန် အရမ်းကိုပိုထိရောက်စေပါတယ်။ Facebook ကနေ User Drive ပြီး Website တွေကနေတစ်ဆင့်ရောင်းခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အခုထက် ပိုပြီး Level တစ်ခုရောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် Ecommerce Website တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Client ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Digital Dots ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ အပ်လို့ရပါတယ်။လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် Facebook ပဲလိုလို Website ပဲလိုလို Digital Dots ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Social Media User Statistics Myanmar | December 2021